Al Shabaab oo sheegtay in ay qarax la eegteen Ciidanka Kenya | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al Shabaab oo sheegtay in ay qarax la eegteen Ciidanka Kenya
Al Shabaab oo sheegtay in ay qarax la eegteen Ciidanka Kenya
Kolonyo ka tirsan Ciidanka Kenya ee qeybta ka ah Midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan Gobolka Gedo ayaa waxaa qarax jidgal ah lagula eegtay degaan ka tirsan Gobolkaasi.
Qaraxan oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa kolonyada Kenya ka tirsan ee lala eegtay waxa ay ku sii jeedeen degaanka Faxfax-dhuun ee Gobalkaasi, iyaga oo sahay u siday Ciidan halkaasi ku sugnaa.
Dadka degaanka ayaa waxa ay sheegeen qaraxan inuu haleelay mid ka mid ah kolonyada Ciidamada Kenya, iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay degaano iyo Tuulooyin u dhaw goobta qaraxa uu ka dhacay.
Shabaab oo masuuliyadda qaraxan sheegtay ayaa waxa ay sheegeen qaraxa jid galka ah in uu qabsaday gaari Beeba ah, iyaga oo sidoo kale sheegay in gabi ahaan uu burburay gaariga, sidoo kalena ay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah gaarsiiyeen Ciidanka Kenya.
Ma jirto ilo rasmi ah oo xaqiijinaya khasaaraha dhabta ah ee ciidamada Kenyan-ka ka soo gaaray qaraxaasi Miinada ah ee Al Shabaab wadada ugu aaseen ciidamada Kenyan-ka.
Inta badan ciidamada Kenya xilliyada ay doonanayaan sahayda iyo waxyaabaha la midka ah waxaa wadada u gala xoogaga Ururka Al-Shabaab oo qaraxyo iyo dagaal toos ah ku qaada.